2008 mars 21 · RAHELY’S Blog – Tous ensemble pour Madagascar – Madagasikara, Malagasy miara-misikina
SOMBINIAINA sy LOVASOA nahavonjy fianakaviana iray
Posté par rahelys dans : Accident,vie quotidienne	, 2 commentaires
SOMBINIAINA sy LOVASOA (It. Charles Randriantseheno Sombiniaina sy It. Lovasoa Randrianarison)
Alohan’ny halasanany izy ireo dia nahavonjy fianakaviana iray miisy olona 3 !
Hisaorana anie Andriamanitra Ray Tompon’ny tompo sy Tompon’ny aina ho azy ireo !
Ny alarobia 18 marsa 2008 vao tafita tao amin’ny interinety ny mailaka nalefan’ny mpitandrina FPMA tamin’ny namana iray nampilaza ny nanjo ireto mpivady mpiray tanindrazana.
Ny alin’ny alatsinainy 17 marsa hifoha 18 marsa 2008, teo amin’ny 12 ora sy 15minitra teo ho eo, efa alina matory avokoa ny olona, no nahare kiakiaka marobe tsy nisy toy izany ny mpitandrina mivady, mipetraka ao amin’ny vadim-piangonana ERF etsy am-pitan’ny 5 làlana Roquépine, 75008 Parisy, toerana nisy azy mivady. Ny zanak’izy ireo koa moa taitra fa nisy fofona may be nanempotra azy !
Koa dia tonga ilay zaza nanantona ireo ray aman-dreniny izay variana teo anolohan’ny televizionina.
Nahare ireo feo ihany ry zareo fa noheveriny ho olona mamomamo avy nanao fety, mitabataba toy ny efa mahazatra !
Kinanjo tonga ity zanany dia lasa ry zareo nijery teo am-baravaran-kely.
Hagagana ny azy ireo !
Miredareda mirefodrefotra ny afo avobe eo amin’ny 2 metatra eo !
« Tsy mbola nisy alina namparary saina sy nofo toy iny » hoy ny vadin’ny mpitandrina niresaka tamiko an-taroby, sady nisefosefo nitomany izy !
Kanefa anie, hoy izy, 8 minitra monja dia efa tonga ireo mpamono afo maro fa vetivety dia tafakatra tany ambony any amin’ny riana faha 6 misy an’izy mivady kely ny afo.
Niantsoantso izahay nilaza tamin’ny mpamono afo hoe : »misy mpivady malagasy mipetraka ao ambony ao ! »
Tafafoha noho ny kiakiaka sy ny afo hono izy mivady ary mbola teo am-baravaran-keliny niresaka nanome hevitra an’ireto mpivady marokanina nifanilam-bodirindrina taminy, hanavotana ny zanak’izy ireo !
Izy mivady irery no tsy afaka nivoaka tamin’ny afo satria nisy randram-by nanakana ny varavaran-kelin’ny tranony !
Ary nony vao nanokatra io varavaran-kely io ry zareo dia nitsofoka toa tadio ny rivotra ka nanampy ny redareda tao amin’ny efitra nisy azy ireo izay avy taty ambany !
Tonga nanaraka ny tohatra izay tokony efa nampanamboarina io loza io !
Dia voatana tao ry zareo !
Hatramin’ny 7 ora maraina dia mbola teo foana ny mpamono afo nanondraka rano ny trano sy ny zavatra rehetra sisa teo satria mbola nanahy ry zareo sao misy otrikafo mety mbola miredareda avy ao !
Mbola manao ny famotopotorana ny momba iny afo nijoalajoala avy tany ambany riana iny ny manam-pahefana amin’izany !
Andriamanitry ny Fiadanana sy ny Fitsanganan’ny maty izay hankalazaina amin’ny Paska izao no hametrahana ny fanahin’It. SOMBINIAINA sy It.LOVASOA !
Mitrotro am-bavaka ireo ray aman-dreny sy havany aty an-dafindrano masina sy any an-tanindrazana koa izahay.
Maneho ny fiarahana ory aminareo, tompoko !
Mitrotro am-bavaka koa an’i Madagasikara izay nahafoy ireto zanany ! – Helisoa, 21 marsa 2008
Raki-kira « Gasikara II » TELOFANGADY